သစ်ပင်အမြင့် ပေ ၆ဝ အထိရှိ၍ အကိုင်းအခက်အရွက်တို့ဖြင့် ဝေဝေဆာဆာ အုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်း ပေါက်ရောက်တတ်သောမျောက်လုပ်ပင်များကို အောက်မြန်မာ နိုင်ငံရှိ သစ်တောများ၌ လည်းကောင်း၊ ဥယျာဉ်များတွင် တခါတရံ စိုက်ပျိုး ထားကြသည်ကိုလည်းကောင်းတွေ့ကြရသည်။ မျောက်လုပ်ပင် ...
မြင်းခွာပင်သည် မြေကြီးပေါ်တွင် တွားသွားသော ပင်စည်ပျော့မျိုး ဖြစ်သည်။ ကွန်ဗောဗျူလေးစီအီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍၊ ရုက္ခဗေဒ အမည်မှာ မာရီမီးယား အီမာဂျီနေတာ ဖြစ်သည်။ မြင်းခွာပင်သည် အခြားအပင်များကဲ့သို့ အထက်သို့ တည့်တည့်မတ်မတ်မပေါက်နိုင်ဘဲ မြေကြီးတစ်လျှေ ...
မြင်းစားဂျုံ ။ ။ သမပိုင်းတွင် စိုက်ပျိုးကြသော ကောက်ပင်များအနက် မြင်းစားဂျုံပင်သည် မြေမရွေး၊ ရာသီဥတုမရွေးပေါက်နိုင်သော ကောက်ပင်မျိုးဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ရာသီဥတု အလွန်အေးသဖြင့် အခြား ကောက်ပင်များကို မစိုက်ပျိုးနိုင်သော စကော့တလန်ပြည်မြောက်ပိုင်း၊ အလ ...
သတ္တလောက၌ သတ္တဝါဟူသရွေ့သည် သစ်ပင်များမှ ရရှိသော အစာအာဟာရတို့ကို မှီဝဲ စားသောက်၍ အသက်ရှင်ကြပေးသည်။ အချို့သော သတ္တဝါတို့သည် အသားကို မှီတင်း၍ အသက်ရှင်ကြသော်လည်း ထိုအစာအာဟာရဖြစ်သော အသားသည် သစ်ပင်များကို စားသုံးရာမှ ရရှိခြင်းဖြစ်ပေသည်။ သစ်ပင်များသည်သာ ...
ပိတောက်ပန်း သည် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ နှစ်သစ်ကူး အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည်။ မြန်မာ ဆယ့်နှစ်လ ရာသီများတွင် တန်ခူးလဟူသော မြန်မာ နှစ်သစ်ကူးလတွင် ပိတောက်ပန်းများ ဝေဆာစွာ ပွင့်ဖူးကြသည်။ မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ပိတောက်ပန်းအား ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အား ကပ်လှူခြင်း၊ ပန်းဆင်ခ ...
မြရာပင်သည် တရုတ်လူမျိုးတို့က ဆေးဘက်ဝင်သည်ဟု ဆိုကာ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းအဖြစ်သောက်သုံးကြသည်။ မြရာပင်သည် အပင်ပုမျိုးဟုဆိုသော်လည်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နယ်မြေတွင်မူ သစ်ပင်ကြီးအဖြစ်တွေ့ရှိရသည်။ မြရာအရွက်တို့သည် အစိမ်းရင့်ရောင်ရှိပြီး အရွက်ရင့်တို့ကို မြန်မာနိုင် ...
မြားဆိပ်ပင် များသည် အမြင်၏ပေ ၆ဝ မှ ၈ဝ ခန်၏အထိရှိသော အပင်ကြီးမျိုးဖြစ်၍ ပေ ၆ဝ ခန့်အတွင်း အကိုင်းအခက်အရွက် များမထွက်ဘဲ ဖြောင့်ဖြောင့် မတ်မတ် တက်သွားသော ပင်စည်ကြီး များရှိကြသည်၊ မြားဆိပ်ပင်သည် မိုရေးစီအီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ယင်း၏ ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ အ ...
မှန်တော့ပင်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ များတွင် မူလပေါက်ရောက် သည့် သစ်ပင်မျိုးဖြစ်၍ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် အနှံ့အပြား ပေါက်ရောက်လေသည်။ အချိုးအစား ကျ၍ ရွက်အုံကောင်းသည့် အပင်မျိုးဖြစ်သည်။ အမြင့် ၂၅ ပေမှ ပေ ၃ဝ အထိ ရှိတတ်သည်။ အရွက ...
တန်းမြင့်အပင်မျိုးများတွင် ပါလေ့ရှိသော ကလိုရိုဖီ ခေါ် စိမ်းရောင်ဒြပ် မပါရှိသည့် အပင်မျိုး အားလုံးသည် မှိုမျိုးတွင် ပါဝင်ကြ၏။ ယင်းတို့၌ ပင်စည်၊ အရွက်နှင့် အပွင့်များ မရှိကြ ချေ။ ထိုအပင်မျိုး သည် နေရာတိုင်းတွင် ပေါက်ရောက်နိုင်၏။ မှိုမျိုးတွင် အမျို ...
မှိုသိမ်ကို ရုက္ခဗေဒ အလိုအရ အက်စကိုမိုင်စီးတီးဟု ခေါ် သည်။ အပင်၏ အရွက်များ၊ အသီးများ၊ စိုထိုင်းသည့် အဝတ် အစားနှင့် စိုထိုင်းသည့်စားစရာများပေါ်တွင် မကြာခဏ အကွက်ကလေးများ ရှိတတ်သည်ကို တွေ့ကြရ၏။ တစ်ခါ တစ်ရံတွင် ထိုအကွက်ကလေးများသည် အတော်ကြီးသည်ကို တွေ ...
ယင်းတိုက်သစ် အနှစ်သားသည် မာ၍ အစင်းကြောင်းများ ထင်လျက် လှပသဖြင့် ပန်းပုထုရန် အလွန် အသုံးဝင်သည်။ အသား၏အရောင်မှာ အညို၊ သို့မဟုတ် အနက် ဖြစ်သည်။ အနောက်နိုင်ငံများမှ အက်ဗနီခေါ် သစ်သားနက်နှင့် ယင်းတိုက်သားတို့သည် ဆင်တူကြသည်။ ယင်းတိုက်သားကို မြေအောက်၌ အတ ...
ယင်းမာပင် ကို ရုက္ခဗေဒအလိုအရ ချပ်ကရာဆီယာ တာဗျူလာရစ္စ ဂျပ်ဆီယူနှင့် ချပ်ကရာ ဆီယာဗီလူတီနာ ရိုးမာ ဟု ခေါ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ထိုယင်းမာပင် မျိုးစိတ်နှစ်ခုလုံးသည် အတော်များများ ပေါက်ရောက်လျက်ရှိကြရာ ထိုနှစ်မျိုးစလုံး ကိုပင် ယင်းမာပင်ဟု ခေါ်လေ့ရှ ...
ယမနေပင်ကို ရုက္ခဗေဒ အလိုအရ ဂမီလီနာ အာဗိုရိယဟု ခေါ်သည်။ အိန္ဒိယ၊ မြန်မာ၊ သီဟိုဠ်နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ များတွင် ယမနေပင်များ ပေါက်ရောက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိုစွတ်သော သစ် တော်များ၌ မြေပြင်မှ ပေပေါင်း ၃၅ဝဝ အထိတွင် ယမနေပင်တို့သည် ဝါးပင်များနှင့် ရော ...
ယုဇနပင် ကို သနပ်ခါးပင်ဟူ၍လည်း ခေါ်သည်။ ရုက္ခဗေဒ အလိုအားဖြင့် မာရယာ အိတ်ဇော တီးကား ဟု ခေါ်၍ ရူတာ စီအီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ ယုဇနပင်သည် အမြဲစိမ်း အပင်မျိုးဖြစ်ပြီးလျှင် ချုံ အကြီးမျိုး၊ သို့မဟုတ် သစ်ပင်အငယ် မျိုး ဖြစ်သည်။ အခေါက်မှာ မွဲပြာရောင်ဖြ ...
ယူကလစ်တပ်ပင် ကို ငှက်ခြောက်ပင်ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြသည်။ ထိုအပင်သည် မာတဲမျိုး ရင်းဝင်ဖြစ်၍ မျိုးစိတ်ပေါင်း ၃၅ဝ မကရှိသည်။ အချို့ယူကလစ်တပ်ပင်များသည် ကြီးမား၍ အချို့ မှာ ချုံပင် မျှသာ ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် ပေ ၆ဝ- ၇ဝ ခန့်မြင့်တတ်ရာ တစ်ပင်မှာ ပေ ၄၈ဝ အထိပင် ...
ဂမုန်းပင်အမျိုးအစား အများအပြား ရှိတဲ့အနက်မှ ရှင်သီဝလိဂမုန်း လို့ ခေါ်တွင်နေတဲ့ Mauna Loa ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေက မြတ်မြတ်နိုးနိုး စိုက်ပျိုးထားရှိကြပါတယ်။ ရှင်သီဝလိဂမုန်း ရဲ့ ရုက္ခဗေဒအမည်ကတော့ Spathiphyllum wallisii ဖြစ်ပြီး peace lily၊ closet lily ...
ရင်ကမ်းပင်၏ ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ ဇာလက္ကာ ဝါလီချီ ယာနာ ဖြစ်သည်။ ထန်းမျိုးဝင်အပင်မျိုး ဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းတွင် တွေ့ရသည်။ ရင်ကမ်းပင်သည် အမြဲစိမ်း သစ်တောများတွင် များသောအားဖြင့် လောင်းရိပ်ခို၍ ကြီးပွား သော အပင်မျိုးလည်း ဖြစ်သည်။ အစေ့ကို စိုက်ပ ...
ရင်ခတ်ပင် ကား အမြင့်ပေ လေးငါးဆယ်၊ လုံးပတ် လေးပေရှိသစ်ပင်မျိုးဖြစ်၍ သွေ့ခြောက်သောလွင်ပြင်သစ်တောများတွင် ပေါက်ရောက်သည်။ ရင်ခတ်ကြီး၊ ရင်ခတ်လေးဟု နှစ်မျိုးရှိသည်။ ရင်ခတ်ပင်သည် ရူဗီအေစီအီးမျိုးရင်းRubiaceaeတွင် ပါဝင်သော သစ်ပင်အလတ်မျိုး ဖြစ်၍ ရင်ခတ်ကြီ ...
Species/Family: Verbenaceae Botany Term: Clerodendron serratum Spreng ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် ပင်ပျော့ ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၃ ပေ မှ ၆ ပေ ထိ မြင့်၏။ ကိုင်းဖြာ၏။ အရွက် ရွက်ဆိုင် အလှည့်ကျ ထွက်၏။ အလျား ၄-၅ လက်မ ရှည်၍ အနံ ၂ ၁/၂ လက်မခန့် ကျယ်သည်။ရွက်ရင်း သိမ်ပြ ...
ရိုင်းစပါးသည် ဂျုံ၊ မုယောတို့နှင့် ဆင်တူသော ကောက် မျိုးဖြစ်၍ ဂရာမီနီးမျိုးရင်းတွင် ပါဝင်ပြီးလျှင် ရုက္ခဗေဒအလို အားဖြင့် ဆီကာလီဆီရီယေးဟု ခေါ်၏။ ဥရောပတိုက် ပင် လယ်နက် မြောက်ဘက်ရှိအရပ်သည် ရိုင်းစပါးကို မူလစိုက်ပျိုး သော အရပ်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။ ရုရှ၊ ...
﻿ ရုံးပသီပင် အင်္ဂလိပ်: Okra အား အင်္ဂလိပ်စကားပြောသော နိုင်ငံအများစုတွင် ladies fingers ဟု ခေါ်ဆိုကြပြီး ပန်းပွင့်သော အပင်မျိုးဖြစ်သည်။ ရုံးပသီပင်၏ မူလဒေသများမှာ အနောက်အာဖရိက၊ အီသီယိုပီယားနှင့် တောင်အာရှတို့ ဖြစ်သည်။ ယင်းအပင်သည် ပူနွေးစိုစွတ်သော ...
ပစ်ချားပလန့်ခေါ် ရေကရားပင်သည် မြန်မာနိုင်ငံအပါ အဝင် အာရှတိုက်အပူပိုင်းဒေသများအပြင် ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစု၊ ဩစတြေးလီးယားတိုက် မြောက်ပိုင်းနှင့် မက်ဒါဂက်စကား ကျွန်းတို့တွင် ပေါက်သည်။ အထူးသဖြင့် ဗော်နီယိုကျွန်းတွင် ပေါများသည်။ ရေကရားပင်သည် နီပင်သေးစီအီး ...
ရေညှိပင်ကို ရုက္ခဗေဒအလိုအရ မတ်ဆိုင်းဟုခေါ်သည်။ ရေညှိပင်အုပ်စုတစ်စုသည် ရေချိုတိမ်တိမ်တွင် ပေါက်၍ အခြားအုပ်စုတစ်စုသည် စိုစွတ်သည့် မြစ်နှင့် ချောင်းကမ်းပါးများတွင် ပေါက်ရောက်ကြသည်။ ကျောက်များနှင့် သစ်ပင်များပေါ်တွင် ပေါက်ရောက်သော ရေညှိပင်အုပ်စုလည်း ...
အပင်ဆိုလျှင် ကုန်းပေါ်၌သာ ပေါက်ရောက်နိုင်သည်ဟု ထင်ကြ၏။ ရေထဲ၌ ပေါက်ရောက်သော အပင်များကို တွေ့မြင် ရသည့်အခါ ယင်းတို့ မည်သည့်နည်းနှင့် ကြီးထွားနေကြသည် ကို အံ့ဩကြပေလိမ့်မည်။ ရေထဲတွင်ပေါက်သော အပင်များ အနက် ရေအောက်မြေပြင်တွင် အေးချမ်းစွာနေသည့်သစ်ပင်ကြီး ...
Species/Family: Papilionaceae Botany Term: Sesbania aegyptiaca Pers ပုံသဏ္ဌာန်: အပင်-- ချုံယောင် ပင်လတ် မျိုးဖြစ်၏။ အမြင့် ၆ ပေ မှ ၁၅ ပေ အထိ မြင့်သည်။ အကိုင်း အခက် များသန်မာ ၍ ဝေဆာစွာ ထွက်၏။ အရွက်-- ငှက်မွေး ရွက်ပေါင်း ဖြစ်ပြီး ရွက်လွှဲ ထွက်သည်။ ...
Species/Family: Rubiaceae Botany Term: Morinda angustifolia Roxb ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ပင်စည် ဖြောင့်တန်း၍ အခေါက်မှာ ချောမွေ့သည်။ အရွက်မှာ ထောင့်မှန် ရွက်ဆိုင်ဖြစ်သည်။ အစိမ်း ရင့်ရောင် ကြီးမား တောက်ပြောင်သော အရွက်များ ဖြစ်သည်။ ရွက်နာ ...
Botany Term: Bryophyllum calycinum Salisb Species/Family: Crassulaceae ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် - အရည်ရွှမ်းသော နှစ်ရှည်ခံ ပင်ငယ် သက်ပြင်း မျိုး ဖြစ်၍ အမြင့် ၁-၄ ပေ ခန့် ထိမြင့် ၏ ။ ပင်စည် ထောင်မတ်၍ ပေါက်၏။ အရွက် - မျက်နှာချင်း ဆိုင် ထွက်၏။ ဘဲဥပုံ သဏ္ဌာန ...
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းတရာ့နှစ်ဆယ်ကျော်ခန့်က ရွက်လှ မျိုးပေါင်း ၃ဝဝ ကျော် ရှိသည့်အနက် အလှအပဆုံး မျိုး ၅ဝ ကိုသာ အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးလေ့ရှိကြောင်း မှတ်သားရဖူးသည်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၅ဝ ကျော်ခန့်က မန္တလေးမြို့တွင် ရွက်လှပန်းပင ...
ရွေးပင်သည် ရွေးကြီးပင်နှင့် ရွေးငယ်ပင် ဟူ၍ရှိရာ ရွေးကြီးပင်ကို ရုက္ခဗေဒအလို အရ အန်ဒီနန်သီရာ ပါဗိုနီနာဟု ခေါ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွှေ၊ ငွေ၊ ဘယဆေး အစရှိသည်တို့ကို ချိန်တွယ်ရာ၌ ရွေးစေ့အကြီးအငယ်ရွေးကြီးစေ့နှင့် ချင်ရွေးစေ့ တို့ကို ပဲ၊ မူး၊ မတ်၊ ကျ ...
Species/Family: Convolvulaceae Botany Term: Cuscuta rellexa Roxb ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် - အခြား သစ်မာ ပင်ကြီးမျိုး ကို မှီတွယ် ၍ အစာ ရေစာ စုပ်ယူ ရှင်သန် ရသော အရွက်မဲ့ ကပ်ပါး နွယ်ပင် မျိုး ဖြစ်သည်။ အကြီး အငယ် ၂ မျိုး ရှိ၏။ အသားထူသည် ။ ပင်စည် ရှည်လျား ပြ ...
ရွှေဖရုံပင်သည် နွယ်ပင်မျိုးဖြစ်သည်။ ရုက္ခဗေဒအလိုအားဖြင့် ရွှေဖရုံသည် ဘူး၊ သခွား စသော အသီးမျိုးများနှင့်အတူ ကျူကာဗီတေးစီအီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ စိုက်ပျိုးသော ရွှေဖရုံမျိုး များတွင် အမျိုးကွဲများရှိသည်။ ရွှေဖရုံတစ်မျိုး၏ ရုက္ခဗေဒ ...
ငရုတ်ကောင်းစေ့ ခန့်ရှိသည်။အစေ့များ ခွံပျော့သီး ဖြစ်၏။ မှည့်သောအခါ အနီရောင် ရှိ၏။ အသုံးပြုနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ: ဥ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်တွေ့နိုင်သောနေရာများ: မြန်မာ နိုင်ငံ အနှံ့ အပြားတွင် ပေါက်ရောက်သည်။ ပေါက်ရောက်ပုံ: သဘာ၀ အလျောက် ပေါက်ရောက်သည် ...
ရှရီမန်ဂျုံပင်သည် အမြင့်သုံးပေခန့် ရှိ၍ နှလုံးပုံအရွက် များ ထွက်သည်။ ထိုအပင်၏အပွင့်များ၌ ဝတ်ရည်များ ရှိ သဖြင့် ပျားများလာရောက်ကြသည်။ ရှရီမန်ဂျုံပင်မှ ရရှိသော ပျားရည်သည် လူကြိုက်အများဆုံး ဖြစ်သည်။ အရောင်မှာ နက် ၍ အနံ့ကောင်းသည်။ ရှရီမန် ဂျုံပင်၏ အသ ...
ရှားစောင်းမျိုးအားလုံးသည် ကက်တာစီအီး မျိုးရင်းဝင်များ ဖြစ်ကြလေသည်။ ရှားစောင်းမျိုးစိတ် အမြောက်အမြားရှိရာ မျိုးစိတ်ပေါင်း ၁ဝဝဝ ခန့်ကို အမည်ပေးပြီးကြ လေပြီ။ ရှားစောင်းမျိုးသည် မျိုးစိတ်များပြားသလောက် ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် အရွယ်တွင်လည်း အမျိုးမျိုး ကွဲပြာ ...
ရှားစောင်းလက်ပပ်သည် မီးယပ်ဆေးအဖြစ် အလွန်အသုံးဝင် ထင်ရှားသည်။ရှားစောင်း လက်ပပ်ကို ပါးပါး လှီး၍ ဟင်းချက် စားပါက ဓမ္မတာကို မှန်စေသည်။ရှားစောင်း လက်ပပ်ကို လိမ်းဆေးအဖြစ် အနှစ်ကို ခပ်ပါးပါး လှီး၍ သွေးစုနာ၊ အကြိတ် အဖုအနာ၊ သွေးလုံး၊ လေလုံး အပေါ် ကပ်ထား ပ ...
ရှားပင် သည် သစ်ရွက်ကြွေတတ်ပြီး ဆူးခက်များရှိသောအပင်ဖြစ်ပြီး ၄၆ ပေ ထိ အမြင့်ရှိတတ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် Catechu ၊ Cachou နှင့် Black Cutch ဟုလည်း အသိများကြသည်။ ရှားကို အာရှ၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ နှင့် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဒေသတို့တွင် တွေ့ရတတ်သည်။ ရှားပင်ကို ...
ရှောက်ပင် သည် အာရှဒေသတွင် ပေါက်ရောက်ရှင်သန်သော အမြဲစိမ်းမျိုးစိတ် အပင်ငယ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် အဝါရောင် အဆင်းရှိသော ရှောက်သီးကို မီးဖိုချောင်ဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်ရာတွင်သာမက အခြားသောအရာများ အတွက်လည်း အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကို အချိုရည် ပြုလုပ်ရာတွ ...
လိမ္မော်ပင်၊ ကမ္ဗလာပင်၊ သံပရာပင်၊ သံပရိုပင်၊ ရှောက်ချိုပင်၊ ရှောက်ပန်းပင်၊ ကျွဲကောပင်တို့ ပါဝင်သော အပင်မျိုးစုကို ရှောက်ပင်မျိုး ဟု ခေါ်၍ ရူတာစီအီးမျိုးရင်းဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုမျိုးစု တွင် အထက်ဖော်ပြပါ ရှောက်ပင်နွယ်သော အပင်များသာမက အခြားမျိုးစိ ...
လက်ခုပ်ပင်သည် စတာကျူလီအေစီအီးမျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ယင်းကို ရုက္ခဗေဒအမည်အားဖြင့် စတာကျူလီယာဖီတီဒါဟုခေါ် သည်။ လက်ထုပ်ပင်မျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းတွင် တွေ့ရှိရသည်။ များသောအားဖြင့် ဤအပင်ကို လျှော်ရရှိရန်အတွက် စိုက်ပျိုးထားတတ်ကြ သည်။ လက်ပံပင်နှ ...
လက်ထုတ်ကြီးပင်၏ ဇီဝဗေဒအမည်မှာ Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don ဖြစ်သည်။ Holarrhena antidysenterica Wall. ex A.DC. ဟုလည်းခေါ်သည်။ Apocynaceae မျိုးရင်းဖြစ်သည်။
လက်ထုတ်ပင်သည် တရုတ်စကားပန်းပင်တို့နှင့် အတူ အဲ့ပေါ့ဆီနေးစီအီးမျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ယင်းကို ရုက္ခဗေဒအမည်ဖြင့် အော်လစတိုးနီးယားစကော်လားရစ်ဟုခေါ်သည်။ လက်ထုတ်ပင်ကို တောင်မဲ အုပ်၊ တောင်မရိုး၊ ဆေးခါးပင်၊ တောင်စကားပင်ဟူ၍လည်း အမျိုမျိုးခေါ်ကြ သည်။ လက်ထုတ် ...
လက်ဖက် သည် အနံ့ပါသော အရွက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ လက်ဖက်ယဉ်ကျေးမှု စတင်ထွန်းကားခဲ့သည်မှာ အာရှတိုက်မှဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ တွင် လက်ဖက်ခြောက် ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားခဲ့ပြီး၊ အိန္ဒိယတွင် လက်ဖက်ခြောက် ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လက်ဖက် ယဉ်ကျေးမှုမျာ ...
လင်းနေပင်သည် အရေးစီအီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ယင်းကို ရုက္ခဗေဒအမည်အားဖြင့် အက်ကိုရပ်ကာလာမတ်ဟုခေါ်သည်။ ရွှံ့ညွန်တွင်ပေါက်သော ပင်ပျော့မျိုးဖြစ်သည်။ အရွက်မှာ ဓားလွယ်ပုံသဏ္ဌာန် နှစ်ပေမှ သုံးပေအထိရှည်၍ ပြက်တစ်လက်မခန့်အထိရှိသည်။ အရွက်၏ အလယ်ဗဟိုတွင် အရင်း ...
လစ်ဗာဝတ်ပင်များသည် စွတ်စိုထိုင်းမှိုင်းသော ရာသီဥတုကို နှစ်သက်ကြသဖြင့် ချမ်အေးသော တောင်ထိပ်များ၊ စိုစွတ် သော မြေကွက်လပ်များ၊ လောင်းရိပ်ရှိသော နေရာများနှင့် သစ်တုံးများပေါ် တွင် အများအပြား ပေါက်လေ့ရှိကြသည်။ လစ်ဗာဝတ် တစ်ပင်လုံးသည် သစ်ရွက်ကဲ့သို့ ပြာ ...
လတ်စပါဆိုသည်မှာ ဗတ်တားကပ်မျိုးရင်းဝင် ဒယ် လဖင်နီယမ်ခေါ် အပွင့်အုပ်စုကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူများ က နှစ်ကြာခံပင်မျိုးကို ဒယ်လဖင်နီယမ်ဟုခေါ်ကြ၍ တစ်နှစ်ခံပင်မျိုးကိုမူ များသောအားဖြင့် လတ်စပါဟုခေါ်ကြသည်။ လတ်စပါပင်သည် ကမ္ဘာလုံး ခြမ်းနှ ...
လဗင်ဒါပင်သည် လာဗီအားတီ မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ယင်း၏ ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ လဗင်ဒူလာဗီရာ ဖြစ်သည်။ လဗင်ဒါပင်သည် ချုံပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၍ အပွင့်နှင့် အရွက်များတွင် မွှေးကြိုင်သော အနံ့များ ရှိကြသည်။ ယင်း၏ မူလပေါက်ရာ အရပ်များမှာ မြေထဲပင်လယ်ဒေသများနှင့် အာရှ တိုက် ...
လမုပင် သည် ရိုင်ဇိုဖော်ရေးစီအီး မျိုးရင်းတွင် ရိုင်ဇိုဖောရ မျိုးစု၌ ပါဝင်၍ ယင်း၏ရုက္ခဗေဒ အမည်မှာ ရိုင်ဇိုဖောရမင်းဂဲ ဖြစ်သည်။ လမုပင် သည် အမြင့် ပေ ၂ဝ မှ ၂၅ ပေအထိ ရှိ၍ အသားမှာ ကျစ်၍ လေးသည်။ အခေါက်ကို သားရေနယ် လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသည်။ လမုသီး၏ အရသာမ ...
လယ်စာပင်သည် ပျဉ်းမပင်ကဲ့သို့ပင် လစ်သရာ စီအီးမျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ယင်း၏ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ လေဂျာစထရီမီယာ တိုမင်တိုဆာLagerstroemia tomentosaဖြစ်သည်။ လယ်စာပင်၏ မူလပေါက်ရာအရပ်မှာ မြန်မာ နိုင်ငံကဲ့သို့ ပူ၍စိုစွတ်သော ဒေသများဖြစ်ရာ ထိုမှတစ်ဆင့် အခြားတိုင်း ...
လယ်ပတူပင် သည် အကန်သေစီအီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ယင်းကို ရုက္ခဗေဒအမည်အားဖြင့် ဟိုင်ဂရိုဖီလား စပိုင်နိုးဆား ဟုခေါ်သည်။ လယ်ပတူကို ဆူးပဒေါင်း ဟုလည်းခေါ်သည်။ အမွေးအမျှင်ထူ ၍ ဆူးရှိသော သစ်နုပင် မျိုးဖြစ်သည်။ တစ်နေရာတည်းမှ နှစ်ပေ မှ ငါးပေအထိရှည်သော ပင်စည ...